I-China Stiffening Nucleator BT-9806 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ukuqinisa iNyukliya BT-9806
I-BT-9806 Iarhente ye-is-Crystal yeNyukliya yimveliso ephezulu yelungelo elilodwa lomenzi wechiza eyenziwe ngomhlaba onqabileyo.
Ingasetyenziselwa ukuvelisa iimveliso ze-PP zetyhubhu ye-PP-R, ukuvalwa, iiMoto kunye nezixhobo zeZixhobo njl.
I-BT-9806 yi-agent-Crystal ejenti ye-nucleating enemveliso ephezulu yamalungelo awodwa omenzi wechiza eyenziwe ngomhlaba onqabileyo onokuthi uphucule ubunzima, ubushushu obugqwetha ubushushu bee-resine zepolyolefin ngaphandle kokuhlazisa ezinye iipropathi zoomatshini. Isicelo siyafumaneka ekubunjweni ngenaliti, iimveliso ezinamagwebu aphezulu kunye nezinto zokuhambisa ubushushu kunye nefilimu eyolula i-biaxially.
1. Ayiyityhefu kwaye ayinavumba;
2. Amandla eempembelelo anokunyuswa ukusuka kumaxesha angama-1-6 ngelixa kugcinwa ukuqina;
3. Ukunyanzelwa kobushushu kunokunyuswa nge-10-40 ℃;
4. Ubume buya kuhlala buzinzile ngokwaneleyo emva kwamaxesha ambalwa kusetyenzwa.
Kg 20 / ikhadibhodi igubu
Egqithileyo Ukuqinisa iNyukliya BT-9801Z
Okulandelayo: I-Masterbatch engabonakaliyo yeBT-800/810
Ukunganyangekiyo kwevumba leNyukliya
Ukuqinisa iNyukliya ye-PE
Ukuqinisa iNyukliya yePP